Guanyu yasungulwa e Qingdao ngo-1997, waqala ngemikhiqizo plastic ibhizinisi wholesale.
Imizamo eqhubekayo neminyaka engaphezu kwengu-20 'yokuzinikela ekuthuthukiseni ukuklama nokukhiqiza imikhiqizo yokugcina
Sikhiqiza imikhiqizo yokugcina esezingeni eliphakeme epulasitiki endaweni yokukhiqiza engama-30,000 square metres
Sifakwe amasethi angaphezu kuka-23 emishini yokujova, amasethi ama-2 emishini eshisayo eshisayo namasethi ama-3 emishini yokushisela ama-micro-wave.
Ukuqinisekisa nokukunikeza ikhwalithi enhle kunazo zonke, yonke imikhiqizo isetshenziswa ngezinto eziyi-100% zezintombi (ngaphandle kokusebenzisa i-doping) kuyo yonke inqubo yokukhiqiza. IGuanyu izibophezele kuwo wonke amakhasimende kungakapheli iminyaka emithathu kusukela ngosuku lokuthengwa noma ukuthunyelwa, sizokhipha noma sibuyisele, ngokuthanda kwayo, nganoma iyiphi imikhiqizo enesici kwinto noma ekusebenzeni mahhala.
AMAKHONO E-R & D
Sisebenzisa i-polypropylene ye-EXXONMOBIL ne-SINOPEC njengokuqukethwe kwemikhiqizo yethu ukuqinisa ukuqina okuhle nokumelana nomthelela. Ngaphandle kwalokho, imikhiqizo yethu idlulise isivivinyo se-REACH, RoHS, FDA, njll.
Bambisana nezikhungo ezidume umhlaba wonke futhi wakhe isikhungo socwaningo lwesayensi sokuhlaziya nokuhlola izinto zokusetshenziswa nezifundo zobuhlakani bomkhiqizo, ezishintshayo, ubuchwepheshe bolwazi, ukulawulwa kwesistimu nokuqinisekisa ukuhlangabezana nentuthuko yanamuhla yobuchwepheshe besitoreji.
I-Guanyu inethimba eliqeqeshiwe nelinolwazi lwe-R & D elinobuchwepheshe beminyaka eminingi ekwakhiweni komkhiqizo nakwenziwa.
Sinamalungelo obunikazi wokusungula amaningi.
Ikhwalithi njengokubaluleka kwethu okuyisisekelo, sibeka uhlelo oluqinile lokulawula ikhwalithi kusukela esigabeni sokuqala somklamo kuze kube sekupheleni kwenqubo yokukhiqiza. Zonke izinqubo zokukhiqiza nezindlela zokuhlola umkhiqizo zenziwa ngokuya ngemikhuba yezimboni kanye nezinga lomhlaba jikelele.
Imigqomo Yesitoreji Esinqwabekile, Ukubeka Imigqomo Yokuthatha, Isitaki nama-Hang Bins, Imigqomo Yesitoreji Esibekiwe Epulasitiki, Imigqomo Yokugcina Isitoreji, Imigqomo Yokugoqa Ngeplastiki,